Shiinaha Abrasive White Zebra Sanding Band Oo loogu talagalay warshadda ciddiyaha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Yaqiin
Nooca: Kooxda Sanding
Waxyaabaha: Dhar, Alumina
Midabada: Brown, Zebra cad, Madow, Cagaar
Weelka: 40#, 60#, 80#, 240#, 320#, 400#, 600#, grits la beddeli karo
Miisaanka: 0.05kg halkii kiish; 0.06kg halkii sanduuq
Faa'iidada Farshaxanka: Si siman u nadiifinta, ilaalinta deegaanka
Isticmaalka: Daryeelka Quruxda, Dusha Dusha, Buuxinta
MOQ: 50 shandadood (100pcs halkii bac); 50 sanduuq (100pcs halkii sanduuq)
Waa Maxay Kooxda Sanding
Kooxda Sanding waxaa loo isticmaali karaa in laga saaro ciddiyaha jel adag, qaabka akril iyo isku darka dusha siman. U fiican dib -u -buuxinta, ka saar wixii qaladaad ah ka dib codsiga ciddiyaha akril. Mandrel -ka kooxda bacaadka waa 3/32 ", sidaa darteed waxay ku habboon tahay inta badan mashiinnada qodista ciddiyaha shank 3/32" ee suuqa. Waxaa loo adeegsan karaa adeegsiga istuudiyaha xirfadeed ama adeegsiga guriga, oo ku habboon manicure -ka iyo pedicure -ka. Ku habboon saloon ciddiyaha, qolka qurxinta, isboortiga ama manicure pedicure, farshaxanka ciddiyaha DIY guriga.
Astaamaha Kooxda Sanding Band
Kooxaha kala soocaya waxaa loogu talagalay walxo waara. Dusha siman oo leh xabagta ayaa si siman loo qaybiyey, ma jiraan wax xabagta oo daata. Waxay abuurtaa waayo -aragnimo raaxo leh, waxay ka saartaa ciddiyaha jel -ka adag, waxay samaysaa akril, waxayna isku dhex -marisaa dusha siman. U fiican dib -u -buuxinta waxayna ka saartaa wixii cillad ah kadib codsiga ciddiyaha akril.
Faa'iidooyinka Kooxda Sanding Band
1. Si sahlan loo isticmaalo: Kooxda Sanding way fududahay in la isticmaalo xitaa bilowga cidiyaha. Ku habboon manicure iyo pedicure. Wuxuu ka shaqeeyaa ciddiyaha dabiiciga ah iyo sidoo kale ciddiyaha macmalka ah. Ku habboon saloon ciddiyaha, qolka qurxinta, isboortiga ama manicure pedicure, farshaxanka ciddiyaha DIY guriga.
2. Shaqooyin Badan: Kooxaha kala soocaya wuxuu fulin karaa shaqooyin xirfadeed oo kala duwan, sida xardho, xardho, shiidi, waddo -marin, fiiqid ciddiyaha akril, ciidda, ciddiyaha gaduudka, ka saar gelinta ciddiyaha gel, iyo qaar kaloo badan.
3. Aan sun ahayn, bay'ada u fiican, xabagta hufan. Ku habboon manicure iyo sidoo kale pedicure. Waxaa loo isticmaali karaa ciddiyaha dabiiciga ah iyo sidoo kale ciddiyaha macmalka ah. Ku habboon adeegsiga istuudiyaha xirfadeed ama adeegsiga guriga.
4. Waxaa lagu naqshadeeyay walxo waara oo waara, hubi inaanu kala dillaacin inta la isticmaalayo oo dushu ay siman tahay. Sii isticmaalaha si raaxo leh oo khibrad leh.
Hore: Warshadda Shiinaha Quartz Ciddiyaha Ciddiyaha Polish -ka Jumlada
Xiga: Alumina Sanding Caps Bit Nail
Bandhigyada Corse Sanding
Sanding Band usheeda dhexe
Bandhigyada Bandhigyada Loogu Talagalay Qodista Cidiyaha
Kooxaha Fallaadha Zebra
Saddex-in-mid ah Tungsten Carbide Cill Drill Bits
Under Ciddiyaha Ciddiyaha dhoobada dhoobada
Koofiyadda Sanding Purple